China RCL-2420 Back-nitaingina LED Linear Light orinasa sy mpanamboatra | lafo vidy
1.lnstallation akaikin'ny aloha
Ohatra fampiasana: apetaho amin'ny tabilao misy laminate ≥25mm
3000k Jiro mafana
Jiro tsy miandany 4200k
Fametahana voahidy, hazo miharo matevina 16mm, faran'ny lamina ao ambadika.
Mazava sy midina amin'ny lafiny roa
Mainty, Aluminium, Volondavenona, Tompondaka)
Ny loharano maivana LED dia afaka mampiasa ny fitsipiky ny loko voalohany amin'ny loko mena, maitso ary manga. Eo ambany fifehezan'ny teknolojia solosaina, ny loko telo dia mety manana ambaratonga volondavenona 256 ary afangaro tsy ara-dalàna hamokarana loko 256 × 256 × 256 = 16777216 hamorona loko maivana. Ny fitambaran'ny fanovana isan-karazany, hahatratrarana karazana vokatra mavitrika sy sary isan-karazany.
Tombony bebe kokoa amin'ny tontolo iainana. Tsy misy ultraviolet sy infrared ao amin'ny spectrum, tsy misy hafanana na taratra, ambany famirapiratana, ary fako azo ahodina, tsy misy fandotoana, tsy misy mercury, loharano mazava mangatsiaka, azo antoka ho voakitika, loharanom-pahazavana maitso mahazatra io.
Ny vatan'ny hazavana dia vita amin'ny alikaola vita amin'ny aliminioma. Ny slot sy tariby tariby dia karazany mitambatra. Ny refin'ny tariby lava indrindra dia 6 metatra. Ny hazavana sy ny vatana lehibe dia rafitra azo esorina, izay tena mety amin'ny fametrahana sy fikojakojana.
Teo aloha: RCL-2118 hazavana LED tariby tafaverina miverina
Manaraka: RCL-2520 hazavana LED tariby miverina miverina